अनुसन्धान भन्छ – तपाईं गल्ती घटाउन चाहनुहुन्छ ? ध्यान गर्नुहोस् « Kakharaa
काठमाडौँ – कतै तपाईंको हतारमा बिर्सने वा बारम्बार गल्ती गर्ने बानी त छैन ! आत्तिनुपर्दैन। नियमित ध्यानको अभ्यासले तपाईंको यो बानी सुधार आउन सक्छ। अमेरिकाको मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीको पछिल्लो अनुसन्धानले ध्यानको नियमित अभ्यासले कुनै पनि व्यक्तिको गल्ती गर्ने आदत घटाउन मद्दत पुग्ने देखाएको छ।
जब ध्यान अभ्यासकर्ताले आफ्नो कार्यकौशलतामा तत्काल सुधार पाएनन् भने अझै केही समय ध्यानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने अनुसन्धाताको निक्र्योल छ। ‘यो निष्कर्ष ध्यानमाथि केवल २० मिनेटमा गम्भीरता साथ गरिएको प्रदर्शनको प्रतिफल हो, जसले ध्यानले ब्रेनको क्षमता अभिवृद्घिमा मद्दत गर्नुका साथै गल्तीप्रति सजग रहने सीप विकास गर्छ भन्ने देखाएको छ,’ मोजरले भने, ‘यसबाट माइन्डफुलनेस मेडिटेसन क्षमता अभिवृद्धिका लागि साँच्चिकै प्रभावकारी हुने रहेछ भन्नेमा विश्वास बढाएको छ।’